Heshiiska Dalalka Ethiopia Iyo Eritrea Ma Caddeynayaa in DF-Somalia aysan Qalad ku gelin Heshiiskii Dekeddaha ? | KALSHAALE
Heshiiska Dalalka Ethiopia Iyo Eritrea Ma Caddeynayaa in DF-Somalia aysan Qalad ku gelin Heshiiskii Dekeddaha ?
Jul 12, 2018 - 2 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Soomaaliya waxa ay kamid tahay dalalka leh Kheyraadka nuuc walba berri iyo bad, laakiin dadkii ehelka u ahaa kama faa’ideystaan mana u diyaarsana midaas.
Dowlado badan oo kamid ah kuwo horumaray ayaa aad u daneeya Soomaaliya gaar ahaan iney maalgashi ku sameeystaan dhulkeeda iyo badeeda balse waxaa u diidaya caqabadaha jira oo Amniga ugu horeeyo.
Burburkii dalka kadib Soomaaliya nasiib uma yeelan in aduunka maalgashto marka laga reebo shirkado laga leeyahay dalal horumaray oo ka howlgala goobo cayiman.
Soomaaliya waxey heshiis maalgashi la gashay dowladda Itoobiya sanadkan 2018, kaa oo ku saabsan in Itoobiya ay maalgelishato afar dakadood oo Soomaaliya dhaca, mana ahan micnaheedu in ay la wareegayaan,
kaliya waxey ku sameynayaan maalgashi waxaana bilaabanaya wax soo saar kadibna labada dal ayaa ka macaashaya.
Mucaaradka dowladda uu hogaamiyo Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa shacabku ku wargeliyay in dowladda ay dakadihii dalka ku wareejisay dowladda Itoobiya.
Dhawaan waxaa heshiisay dowladaha Eriteriya iyo Itoobiya oo dagaal xun uu ka dhaxeeyay, waana laba dal oo deris ah, labada hogaamiye ayaa isku afgartay heshiisyo kala duwan waxaana ugu weynaa in Itoobiya ay maalgashato dekadaha dalka Eriteriya kadib markii la soo afjaray colaad dagaal oo u dhaxeysay muddo sanado ah labada dowladood.
Heshiiska Dowladaha Eriteriya iyo Itoobiya ee dekadaha kama duwana kan ay Itoobiya la gashay Soomaaliya, waana heshiis caadi ah oo dhibaato laheyn.
Qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ayaa siyaabo kala duwan u arkay heshiiska, qaar soo dhaweeyay iyo kuwo ka hor yimid, laakiin u baahan fahan guud in laga siiyo maalgashiga Itoobiya ee dekadaha Soomaaliya.
Waxa Soomaalida dhibaya ayaa ah in Xabashida oo naceyb badan ay u qabaan iney hadane dalkii maalgashtaan, maadama labada dal uu dagaal xun oo ilaa imika laga sheekeeyo dhexmaray sanadkii 1977-kii.
Akhyaarta ra'yigiina halkan ku qora (2)
Hilbo aan isku so’ aheyn layskuma saafo waa marka kowaad somaliya maba aha dal xor ah oo waxna ogolaankara waxna diidi kara meesha ereteria eey xataa laali karto heshiis kasta oo ethiopia uga yimaada.Tan kale dowladu mucaarad maleh afarta nin ee jago doonka mucaarad lama dhihi karo.Markii aan is ogolaano anagoo somali allaha nagaarsiiyo markaas ajnabiga iskasaarno heshiis waan galikarna.
Anigu waxaan imaadey UK 1995, haddii ay France qaadato UK waxaa laga yaabaa inaan uga xumaan sida Ninka ENGLISH ah,
Sidaas oo kale Soomaalida waa nin dhulka inuu yimid aaminsan oo aan ka naxeyn sida Soomaalida timid UK oo la qaato, iyo nin Dhulka loogu yimid sida English Cadaankaa oo kanaxaayo.
– Kuukuuyo iyo Tigree ninkii keenay Soomaaliya, kuna faraxsan iney Gumeystaan Somaligalbeed iyo NFD waxaa saaran Calaamatul Su’aal.
– Dalku Waa Somalia, dadku waa Samaale iyo nin Soomaaliyeeyey.